Hapụ ihe nketa na-echefu echefu - BullyingCanada
A ga-echeta gị nke ọma maka ịkwado ndị ntorobịa a na-emegbu emegbu ruo ọgbọ ndị na-abịa
Site n'inye onyinye ọmịiko na echefu echefu BullyingCanada site na ala gị, ị ga-enwe mmetụta dị mma na ndụ ụmụaka ndị a na-emegbu onwe ha, ọbụna ogologo oge mgbe ị gachara. Biko gwa onye ndụmọdụ gị gbasara ego ka ịhọrọ ụdị onyinye nketa ga-adabara mkpa gị.
Onyinye N'uche Gị:
N'ime uche gị, ị nwere ike igosipụta ọmịiko gị maka ụmụaka a na-emegbu emegbu site n'ichepụta onyinye BullyingCanada Inc. Ị nwere ike ịhọpụta ego, otu ihe onwunwe, ma ọ bụ pasentị fọdụrụ nke ala gị. Ị nwekwara ike ịnye ihe nchekwa site na uche gị. Site n'ime nke a, ala na ụlọ gị agaghị akwụ ụtụ isi uru ọ bụla na uru nke nchekwa nchekwa. Ọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala ịgbakwunye onyinye afọ ofufo na uche gị site n'ime ka onye ọka iwu depụta codeicil nke na-akọwa ebumnuche ọrụ ebere gị. Site n'ime otú ahụ, ị ​​gaghị eme ka uche gị dum gbanwee. Gbaa mbọ hụ na echekwara koodu codicil gị site n'uche gị, onye ọrụ gị nwere ohere ịnweta akwụkwọ abụọ ahụ. Download anyị Onyinye dị na akwụkwọ akụkọ ga-eme na anyị Onyinye nke Securities Fact Sheet ịmụtakwu ihe.
Onyinye mkpuchi ga-enyere gị aka iji ike mkpuchi na-eto eto na-amụba mmesapụ aka gị. Ị nwere ike inye onyinye mkpuchi ndụ akwụ ụgwọ ị na-adịkwaghị mkpa site n'ime BullyingCanada Inc. onye nwe na onye ga-erite uru na amụma gị. Ọ bụrụ na a ka nwere ịkwụ ụgwọ maka iwu gị, site n'ịkpọ aha BullyingCanada Inc. dị ka onye nwe amụma gị, BullyingCanada ga-ezitere gị nnata ọrụ ebere kwa afọ maka ụgwọ ọnwa ị na-aga n'ihu na-akwụ. Ọ bụrụ na ị kpọrọ aha BullyingCanada Inc. dị ka onye na-erite uru na amụma mkpuchi ndụ ma ọ bụ ụdị mkpuchi ọ bụla ọzọ (annuities, edenyere aha n'akwụkwọ, ego kewapụrụ), mgbe ahụ ala gị ga-enweta akwụkwọ ụtụ isi maka uru zuru oke nke onyinye ahụ n'oge ị gafe. Download anyị Onyinye nke akwụkwọ akụkọ eziokwu ịmụtakwu ihe.
Onyinye nke RRSPs na RRIFs:
Ọ dị mfe ịnye ego sitere na atụmatụ nchekwa ezumike nka edebanyere aha (RRSP) yana ego ị nweta ezumike nka edebanyere aha (RRIF) nye BullyingCanada Inc. Nweta akwụkwọ mgbanwe nke onye ga-erite uru site na ụlọ ọrụ ego na-ejide ego ndị a ma gbanwee onye ga-erite uru na BullyingCanada Inc., ma nyefee akwụkwọ n'aka ụlọ ọrụ ego a. Download anyị Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke ego ezumike nka ịmụtakwu ihe.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ ọrụ onyinye: (877) 352-4497 ma ọ bụ email: [email protected].